I-PLOS kunye ne-TCC e-Afrika isebenzisana ukuxhasa abaphandi base-Afrika- AfricArXiv
E papashwe ngu UJohanssen Obanda on 19th Meyi 2021 19th Meyi 2021
Kwi-AfricArXiv, siza kuqhubeka nokuseka ukuPapashwa okuVulekileyo kokuHambela kwemisebenzi kwimimandla yehlabathi kunye nabapapashi abafikelelekayo, abafikelelekayo nabaluncedo kuluntu lonke lwabafundi baseAfrika. Sijoyina i-TCC Afrika kunye ne-PLOS kwiinzame zabo zokukhuthaza nokwandisa ukufikeleleka okuvulekileyo kunye nokuvula isayensi ngokubanzi.
Esi sisibhengezo esenziwe yi-TCC Afrika malunga nentsebenziswano.
The Vula ukufikelela kumshicileli we-PLOS, kwaye i IZiko loQeqelelo loNxibelelwano, esekwe kwiYunivesithi yaseNairobi, eKenya, (eyaziwa njenge-TCC Africa) ibhengeze ubuhlakani bokuqinisekisa ukuba umdla kunye neenqobo zoluntu zophando zaseAfrika zimelwe kupapasho lwe-PLOS, imigaqo-nkqubo kunye neenkonzo. Le mibutho mibini izakusebenzisana ekufundeni nasekudaleni iindlela ezivulekileyo zoPhando oluSebenzayo ezisebenzisela abaphandi baseAfrika kunye nabathathi-nxaxheba kwi-ecosystem yoluntu xa kugcinwa imiba ephambili yoPhando oluVulekileyo.
"Esi sisiqalo sobambiswano olumangalisayo oluza kuxhasa abathathi-nxaxheba kwezemfundo ephakamileyo ekwamkeleni inzululwazi evulekileyo, eya kuthi incede ekwandiseni ukubonakala kophando lwabo," utshilo uJoy Owango, uMlawuli oLawulayo we-TCC Afrika. "I-PLOS kunye ne-TCC Afrika baneenjongo ezifanayo ukuxhasa uphando kunye noluntu kwezemfundo ngokwenza uphando ngentando yesininzi ngokwamkelwa kwesayensi evulekileyo."
“Sonwabe ngendlela engathethekiyo ngokusebenza noJoy kunye ne-TCC Afrika. I-TCC Afrika liqabane lendalo le-PLOS, njengoko imibutho yethu yabelana ngeenjongo ezifanayo, utshilo uRoheena Anand, isihloko, PLOS. "Sizimisele sobabini ukuqhubeka nenkqubo evulekileyo yesayensi kunye nokwandisa ukumelwa kunye nokubandakanywa kophando lwaseAfrika kwinqanaba lehlabathi, kodwa ngeendlela eziphuhliswayo, sisebenzela uluntu lwasekhaya."
IZiko loQeqesho kunxibelelwano (i-TCC eAfrika), liziko lokuqala loqeqesho olusekwe e-Afrika ukufundisa izakhono zonxibelelwano ezisebenzayo kwizazinzulu. I-TCC Afrika liziko eliwina iTrust, elasekwa njengeziko elingenzi nzuzo ngo-2006 kwaye labhaliswa eKenya. I-TCC Afrika ibonelela ngenkxaso kumandla ekuphuculeni iziphumo zabaphengululi kunye nokubonakala ngoqeqesho kunxibelelwano lwabaphengululi nakwisayensi.
I-PLOS yinto engenzi nzuzo, umpapashi woFikelelo oluVulekileyo oxhobisa abaphandi ukuba bakhawulezise inkqubela phambili kwezenzululwazi nakwezamayeza ngokukhokelela kutshintsho kunxibelelwano lophando. Oko besophula imida ukusukela oko sasisekayo ngo-2001. Iijenali ze-PLOS zaqhubela phambili intshukumo ye-OA ezizezinye kwiijenali zokubhalisa. Saseka upapasho lokuqala olunamacandelo amaninzi oluquka lonke uphando olugqwesileyo ngaphandle kwento entsha okanye ifuthe kwaye sabonisa ukubaluleka kokufumaneka kwedatha evulekileyo. Njengoko iNzululwazi evulekileyo iqhubela phambili, siyaqhubeka nokuzama ukubonelela ngamathuba ngakumbi, ukhetho, kunye nemeko yabafundi nabaphandi.
Esi sibhengezo sapapashwa okokuqala e tcc-africa.org/plos-and-tcc-africa-partnering-to-support-african-researchers/
Iindaba ezibonisiweyo nge-PLOS kunye ne-TCC Afrika
Njengegalelo kwi IVeki yoPhononongo loontanga 2020, I-TCC yase-Afrika kwaye I-AfricArXiv baququzelele i-webinar ukuba ingene nzulu kuphuhliso lwetekhnoloji entsha eya kuVavanyo oluKhawulezayo kunye noVulekileyo loontanga. Ngaphezulu kwama-300 opapasho (ushicilelo kunye nenqaku lejenali) ziyafumaneka kwi-Intanethi ezichazayo I-COVID-19 yoPhando malunga neAfrika
Thina, iqela labapapashi kunye nemibutho yonxibelelwano yezifundo, siyazibophelela ekusebenzeni kunye kuphononongo olukhawulezayo lokuphononongwa kunye nokuphononongwa kwenyathelo lokudlulisa ngenjongo yokwandisa ukusebenza kunye nesantya senkqubo yokuphononongwa koontanga yophando lwe-COVID-19.
tags: fikelela ufikelelouvulele isayensiPLOSukupapashaI-TCC yase-Afrika